६५ वर्षे छुटकनु चौधरी भन्छिन्- पुरुष होस् वा महिलाको नाममा, नागरिकता चाहियो – Tharuwan.com
प्रकाशित : २०७९ जेठ २६ गते २१:०५
‘सानै छँदादेखि मलाई केटीमान्छेका लुगा लगाउन मन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ साँझपख गाउँमा हुने नाचगान हेर्न जाँदा केटीजस्तै बन्थेँ,’ उनी भन्छिन्, ‘घर फर्किँदा फेरि केटाजस्तै बन्थेँ।’
हालै काठमाडौंमा गैरसरकारी संस्था ‘मितिनी नेपाल’ को एक कार्यक्रममा भेटिएकी उनले दाहिने नाडीमा चुरा आकारको कालो रबर लगाएकी थिइन्। देब्रे नाडीमा धातुको एउटा चुरो थियो। घाँटीमा सुटिया भनिने परम्परागत थारू गहना लगाएकी थिइन्। पाकेको, न छोटो न लामो कपाल पछाडिपट्टि बाँधेकी थिइन्।
छुटकनुले भनिन्, ‘पहिलो पटक काठमाडौं देख्न पाउने कुराले म धेरै खुसी थिएँ। तर मसँग लगाउने लुगा थिएन। नारायणले लुगा दिन्छु भनेपछि म आउन पाएँ।’
‘उता (कैलालीमा) त सानासाना घर छन्। यता (काठमाडौंमा) त दरबार जस्ता घर रहेछन्। जता पनि घर मात्रै! माटो त कता हो कता! उता धूलो मात्रै छ,’ छुटकनुले भनिन्, ‘मलाई त यतै रमाइलो लागिरहेको छ।’
‘बाबु साहुको बारी जोत्नुहुन्थ्यो। हामी पनि त्यहीँ बाबुलाई काम सघाउँथ्यौं। स्कुलको मुखै देख्न पाएनौं,’ छुटकनुले भनिन्, ‘दैवको आँखा लागेर म दश वर्षकी हुँदा आमाबाबु दुवैको एकै साल मृत्यु भयो। त्यसपछि हामी साहुका कमैया भयौं।’
‘फुर्सद हुँदा कहिलेकाहीँ साँझमा मादल बजाएर नाचेका ठाउँमा पुग्थेँ। अरू नाचेको देख्दा मलाई पनि नाच्न मन लाग्थ्यो,’ छुटकनुले भनिन्, ‘आइमाईहरूले लगाएजस्तै टीका, गाजल र चुरा लगाउन मन लाग्थ्यो। कहिलेकाहीँ मागेर एकछिन लगाउँथेँ।’
छुटकनुले भनिन्, ‘काम ढिलो गरेको भनेर पनि कुटाइ खाएँ। केटाकेटीको रहर साहुले किन बुझ्थ्यो र!’
‘मेरो मनमा किन म केटीजस्तो हुन थालेको छु, किन केटाको लुगा मन पर्दैन भनेर कुरा आउँथ्यो। तर आफैंलाई थाहा थिएन,’ उनले भनिन्, ‘साहुका घरमा धेरै काम गर्नु पर्थ्यो। आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद पनि हुँदैन थियो। तर मलाई केटा मान्छेहरूसँग बोल्न मन लाग्थ्यो। आफ्नो मनको कुरा पोख्न मन लाग्थ्यो। भन्न डर लाग्थ्यो।’